Dengue An’arivony ireo marary ao Mahajanga
Raha saika any amin’ny ady amin’ny coronavirus avokoa ny mason’ny rehetra amin’izao dia fantatra fa mihamahazo vahana hatrany ny aretina Dengue ao Mahajanga.
Raha araka ny tarehimarika azo dia efa mahatratra 1 043 ireo olona mararin’ity aretina ity any an-toerana raha araka ny fanazavana nentin’ny Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka ao an-toerana, ny Dr Rivomalala Rakotonavalona. Na izany aza dia efa nahazo fanafody avokoa ireo marary rehetra ireo ary manaraka fitsaboana ao amin’ireo hopitalibe sy ny CSB rehetra any an-toerana. Tsiahivina moa fa tamin’ny 04 mey lasa teo no nahitana ny trangan’aretina dengue voalohany tany Mahajanga. Ho an’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana kosa dia fantatra fa efa nahatratra 17 ireo olona matin’ity tazomoka ity any an-toerana. Marihina moa fa lavitra vao mahita ny tobim-pahasalamana ireo mponina any an-toerana. Ratsy dia ratsy ihany koa ny lalana, antony mahatonga ireo olona mamoy ny ainy vokatry ny tazo any an-toerana.